Imisebenzi yobugcisa ngeebhotile zeglasi: ezona zimvo zibalaseleyo kunye neengcebiso | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Yezandla ngeebhotile zeglasi
Iindidi ezininzi zenkunkuma ziveliswa ekhaya yonke imihla. Enye yazo ziibhotile zeglasi. Unokwenziwa ezininzi Imisebenzi yeglasi yebhotile ukunceda ukuphinda kusetyenziswe kwakhona kunye nokukhuthaza ubuchule bokuyila. Zingasetyenziselwa ukuba nexesha elimnandi ngexesha lakho lasimahla. Ukuba zenziwe ngeglasi, singasebenzisa ubuhle beglasi, ngokungafihlisiyo kunye neemilo zayo ukuze sikwazi ukwenza into eluncedo kwaye siyijike ibe yinto engaphezulu kwezinto ezilula zokuhombisa.
Kule nqaku siza kukuxelela ubugcisa ngeebhotile zeglasi.
1 Yezandla ngeebhotile zeglasi
1.1 Izibane zebhotile
1.2 Isiphatho sesibane okanye isiphatho sekhandlela
2 Imisebenzi yobugcisa eneebhotile zeglasi zotywala
3 I-vase kunye ne-terrarium ngeebhotile zeglasi ezihonjisiweyo
Imisebenzi yezandla yeglasi okanye iibhotile zeglasi zikunika ithuba lokubuyisela ukusebenza kweziqulatho ezikumgangatho ophezulu, ezizinzileyo ezilahlayo, ezinje ngebhotile yewhisky, iwayini, okanye ijusi. Akusoloko kuyimfuneko ukugweba iibhotile zeglasi kwisitya sokurisayikilisha, kodwa sinokuphinda sinikwe ubomi obulandelayo obuluncedo. Nangona kunjalo, kungcono ukuphinda usebenzise kwakhona kunokuzixuba nenkunkuma.
Nangona kunjalo, apha sithembisa ukuzisebenzisa ukwenza into eluncedo kwaye intle, into efanele ukunconywa, njengokupeyinta okanye ukufaka imibala kuyo. Izimvo esizibonisa apha ngezantsi zezona ndlela zixhaphakileyo zokuphinda zisetyenziswe, kodwa sinokwenza nezinye izinto ezininzi kunye nabo, ezinjengokubabeka ecaleni kweemfama kwaye sonwabe Iimpawu ezibonakaliswa lilanga kuzo, okanye zizalise njengezinto ezincinci.
Nokuba singabantu besandla, bakulungele kakhulu ukwakha ezona ndonga zokuhombisa. Nazi ezinye zeendlela zokuphinda usebenzise iibhotile zeglasi kwaye uziguqulele kubugcisa obuhle bokuhombisa.
Enye yeendlela ezilungileyo zokuphinda usebenzise le nto kukwenza izibane zetafile ezintle okanye uzixhome kwiibhotile zewayini. Ilula kakhulu kunokuba ibonakala. Ukwenza oku, siya kuqala ukucoca ibhotile. Sisusa izitikha okanye amaphepha aneemveliso. Ukuba ayiveli ngokupheleleyo, Singayicoca ngamanzi afudumeleyo okanye ngotywala kwilaphu ukugqiba ukususa iphepha.
Emva koko siya kuqhubeka siyisika. Eyona ndlela ilula kukusebenzisa umsonto otyebileyo womqhaphu (njengomsonto womqhaphu osetyenziswa kwikhonkco) kunye ne-acetone. Sijika iqhekeza lisike amaxesha ambalwa emva koko sibopha umsonto. Sayikhupha emazantsi, sayifaka kwi-acetone sayibuyisela endaweni yayo. Kwangelo xesha sifaka amanzi omkhenkce kwibhakethi elincinci ukuze kubande kakhulu.
Nje ukuba sibuyisele intambo ebhotileni, siyayilayita kwaye siyijike ukuze idangatye lingahlali kwindawo enye kuphela. Siyinika malunga nemithambo eli-10 kwaye siyifaka emanzini. Ukuqhagamshelana nengqele kuya kubangela ukuba indawo efakwe kwimisonto yahlulwe, nto leyo eya kusenza sikwazi ukuphumelela kakuhle. Kubalulekile ukunxiba iiglasi zeplastiki ukuthintela iiglasi shards ekungeneni emehlweni ethu.
Isiphatho sesibane okanye isiphatho sekhandlela
Ukwenza iikhandlela, iikhandlela okanye izibane, sinokuhombisa iibhotile zeglasi, okanye ukuba zintle kakhulu, njengewayini okanye iziselo ezimhlophe, singazisebenzisa ngokuthe ngqo. Ukwenza oku, sifuna ick umsonto wobhedu kunye nesidibanisi, ezinje ngezihlanganisi zemibhobho yamanzi ashushu angaphandle, iTeflon kunye notywala obutshisiweyo.
Sigubungela inxenye yendibaniselwano kunye neTeflon kude kube kulungelelaniswe kububanzi bebhotile, emva koko sibeka umsonto. Siza kuba nomnqwazi omde. Kwibhotile sazisa ulwelo, kule meko utywala, kodwa inokuba yiparafini, kwaye sibeka ikepusi ngentambo. Singayisebenzisa ngale ndlela, okanye singasebenzisa ipali ye-intshi e-4 kunye nezikere ezonyukayo ukuyilungisa eludongeni ukugcina umgama kwaye ungatshisi udonga.
Imisebenzi yobugcisa eneebhotile zeglasi zotywala
Ngokuqinisekileyo ngaphezulu kwebhotile ye-gin esakha sayiyala. Ngale nto sinokwenza isepha yokuhambisa. Oku kulula kakhulu. Sidinga kuphela isixhobo esivelayo, kukhethwa intsimbi, ukuxhoma phezulu kwebhotile. Singayisebenzisa ngesepha ukuhlamba izandla kwigumbi lokuhlambela, isepha yasekhitshini okanye naphi na apho sinokucinga khona.
Ukuba unomdla wokwenza ngesandla, ungazogquma ngephepha elinemibala okanye wenze nemizobo ebukekayo. Beka nje isiqwenga sephepha kwaye unokuguqula eyona bhotile ikruqulayo ibe ngumhombiso omuhle.
Olunye usetyenziso olulungileyo kukwenza iglasi kwiibhotile, ufuna nje ukusika iglasi, okanye ungayenza ngesandla usebenzisa inkqubo eshushu nebandayo de iphule, njengaleyo siyisebenzisela izibane zebhotile. Kuya kufuneka ubeke umbono wakho ukuze izinto ezinomdla ziphume.
Eyona ndlela yokupeyinta Ibhotile yeglasi kukusebenzisa ipeyinti ebhodini. Ukongeza kumnyama, kukho imibala eyahlukeneyo, yonke iyimatte kwaye intle kakhulu. Banokusetyenziselwa ukubhala izivakalisi ngetshokhwe. Beka idyasi yebhodi ebhodini kwiibhotile zeglasi kwaye uya kuphefumla ubomi obutsha kuzo.
I-vase kunye ne-terrarium ngeebhotile zeglasi ezihonjisiweyo
Kulo msebenzi wobugcisa sidinga iglasi okanye ibhotile yeglasi kunye neebhulukhwe ezindala. Ngokuqinisekileyo unebhulukhwe endala engasetyenziswanga kwaye ungayinika obunye ubomi. Ukuba uneejean ezininzi kulunge ngakumbi kuba inokuhonjiswa ngemibala eyahlukeneyo eblowu.
Ukwenza oku, sibeka iibhendi zeetoni kwigradient ukusuka kweyona imnyama ukuya kweyona ikhanyayo. Sinokusebenzisa iindawo ezahlukeneyo zebhlukhwe, ezinje ngeepokotho okanye amaqhosha, kunye nokusika izikwere ezinobungakanani obahlukeneyo ukwenza iipatches okanye iikholaji.
Iiterrariums zikwifashoni kwaye kunjalo nangegadi ezincinci. Ngoku sicebisa ukuba uphinde usebenzise iibhotile zeglasi kwimimandla apho unokunika ubomi kwizityalo zakho kwaye kwangaxeshanye uhombise ikona ekhethekileyo. Yintoni egqithisile ngekhe uhlale uzikhathaza ngokuseza. Ungazisebenzisa ngokungathi zizimbiza kodwa, kwimeko enjalo, iimbiza ezikhethekileyo oya kuthi ukwazi ngazo ukwenza umphumo owahlukileyo. Izityalo ezimuncu zikulungele ukutyala kwezi ndidi zeembiza zokuzenzela kuba ziya kufuna ukhathalelo oluncinci. Kukugqibelele ukuhombisa igumbi lokuhlala.
Sinokwenza izitiya ezixhonyiweyo ezintle ngeebhotile. Gcwalisa igadi yakho, ithala okanye ipatio ngombala kunye nabo kwaye uya kunika umoya wokuqala ikona apho ubungazi ukuba ubeke ntoni. Awudingi okungakumbi ukuze ufumane isiphumo esothusayo.
Ndiyathemba ukuba olu lwazi ungafunda ngakumbi malunga nobugcisa ngeebhotile zeglasi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Yendalo » Ukusetyenziswa kwakhona » Yezandla ngeebhotile zeglasi
Yintoni uxanduva lokusetyenziswa